iziqhamo kunye nendawo yokutya imifuno
Ukuhanjiswa kwesikhongozelo ukuya eYurophu
Iindaba ezimnandi! Inkampani yethu ithumele iikhabhathi ezintandathu eYurophu kule veki. I-Suzhou Yuanda Commercial Equipment Co., Ltd. ngumenzi onikezelwe kwizixhobo ze-ultra, ezinje ngeevenkile ezishelfini, iitroli, iibhaskithi zokuthenga, iiraki zemifuno, iirejista zemali, njl. Iimveliso zithunyelwa kwiimarike zaphesheya, a ...
Imigaqo kunye neempawu zoyilo lweshelufu
Kuqala jonga umthamo wendlu yokugcina, kunye nomthamo, ubunzima, ubungakanani, njl njl. amandla. Isibini...
Isitayile sokugcina isitayile seSuzhou sisebenzisa kakhulu indawo yokugcina
Isakhelo sonke sokugcina isitayile seloft sihlanganisiwe, akufuneki ukuwelda kwindawo, kwaye yonke intle kwaye inesisa. Xa kuthelekiswa nesakhiwo sekhonkrithi okanye icandelo lesinyithi, kuba ishelufu esemgangathweni ngokwayo idlala indima exhasa ...
Ukufunyanwa kwesicwangciso sokuyila kwishelufa yogcino lweSuzhou kufuna ukuthatha inxaxheba okusebenzayo kokubini kokubonelela kunye nokufuna amaqela
Ukufunyanwa kwesikimu sokuyila i-rack yeSuzhou kufuna ukuthatha inxaxheba okusebenzayo kokubini kokubonelela kunye nokufuna amaqela. Ngenxa yokwanda kwesidingo sokugcina iirack namhlanje, iirack zokugcina ziye ngokuthe ngcembe zaba sisiseko sokugcina esifunekayo kwiindawo zokugcina izinto. Kwishelufa lokugcina s ...
Indlela yophuhliso lwenethiwekhi yeSuzhou Shelf, ishishini lemveli
Akukho mathandabuzo malunga nokufumaneka kwe-Intanethi ebantwini. Abantu bahlala besebenzisa "i-Intanethi enamandla onke" ukuchaza ukunceda kunye nokubandakanya konke kubudala be-Intanethi. Akukho mveliso kwi-Intanethi ongenakuzithenga, kuphela awunakucinga ngayo, ukusuka ...
Idilesi:IZhangcun Industrial Park, Idolophu yaseWangzhuang, Changshu, iSuzhou City, kwiPhondo laseJiangsu, China